Life on Mars ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
2018 ခုနှစ် June လထဲမှာ OCN ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Korea Crime , Fantasy , Drama , Science Fiction ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …
အခုခေတ်က စုံထောက်ခေတ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော် … အသစ်ထွက်တဲ့ KDrama တိုင်းက စုံထောက်ကားကြီးပဲ … ဒီကားလေးကတော့ 2006 ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ UK Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Life on Mars ကိုပဲ အခြေခံပြီး ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ …
ဟန်ထေးဂျို ( Han Tae Joo ) ဟာ ဒေသဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဌာန ( RIU ) က စုံထောက်တစ်ယောက်ပါ … ရုပ်ရည်ချောမောတယ် , အရည်အချင်းရှိတယ် ဒါပေမဲ့ သူ့လုပ်ရပ်မှ မှန်တယ်ဆိုပြီး ယူဆတတ်တယ့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူပေါ့ …
တစ်ရက်မှာ လက်သည်းဆိုးနီ လူသတ်မှု ဆိုတဲ့ လူသတ်မှုတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခွင့်ရခဲ့တယ် … မိန်းကလေးတွေကို စိတ္တဇဆန်ဆန်လိုက်သတ်ပြီး သေသူရဲ့ လက်သည်းမှာ လက်သည်းဆိုးနီလေး ပြန်ဆိုးပေးခဲ့တဲ့ အမှုပေါ့ …
သက်သေအထောက်အထားတွေကိုလိုက်ရင်း သာမန်လူသတ်မှု တစ်ခုမဟုတ်ပဲ ကွင်းဆက်လူသတ်မှုတစ်ခုဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် … အဲ့အမှုကို လိုက်ရင်း သူ့ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း ရှေ့နေ့မလေးကို လူသတ်တရားခံလို့ ယူဆထားရတဲ့သူက ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ပါတယ် … ထိုကောင်မလေးကို ကယ်တင်ဖို့ ကြိုးစားရင်း စုံထောက် ဟန်ထေးဂျို တစ်ယောက် သေနတ်ဒဏ်ရာရရှိကာ …
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့မှာ အိုလံပစ်အားကစား ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့စဉ်ကာလ ၁၉၈၈ သို့ ရောက်ရှိသွားပါတယ် … အဲ့နောက်မှာတော့ ထိုကာလ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လူသတ်မှုမျိုးကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် … ဒါကြောင့် သူ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကို ပြန်ရောက်နေရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က ထိုကွင်းဆက်လူသတ်မှုရဲ့ ဇာစ်မြစ်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ပဲ ဆိုတဲ့ အချက်ကို သိရှိလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ……..
Rating အရ MyDramaList မှာ 8.7 အထိ ရရှိထားတဲ့ Fantasy , Crime Drama တစ်ခုပါ …
Translator : Ziven
= = = = = = THE END = = = = = =
Starring: Go Ah-sung, Jung Kyung-ho, Kim Jae-kyung, Kim Ki-chun, Kim Young-Pil, Noh Jong Hyun, Oh Ah-Rin, Oh Dae-Hwan, Park Sung-woong,
The Gifted ( 2018 )
ဒီတစ်​​ခေါက် ​​MMATVက တင်​ဆက်​​ပေးသွားမယ့်​ဇာတ်​လမ်း​လေးက​တော့ The Gifted Seriesဆိုတဲ့ ထိုင်းဇာတ်​လမ်းတွဲ​လေးပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​ -သဘာဝလွန်​ဖြစ်​ရပ်​​တွေကိုမှ ကြိုက်​တဲ့ ပရိ သတ်​​လေး​တွေအတွက်​ ဒီလျှို့ဝှက်​ပြီးထူးဆန်းတဲ့ ဇာတ်​လမ်း​လေး​ကို ​ထိုင်းchannelတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ GMMTVမှ ထုတ်လွှင့်​​ပေးထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ စုစုပေါင်း ၁၃ပိုင်းပါရှိပြီး တစ်ပိုင်းကို အပိုင်းခွဲ၎ပိုင်းဆီပါဝင်ပါတယ် ဇာတ်​လမ်းအကျဉ်း​လေးက​တော့ Ritdhaအထက်တန်းကျောင်းမှာgiftedဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေရှိပြီး အဲ့ကျောင်းသားတွေပဲ ပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့ Gifted Programဆိုတာရှိပါတယ် …
Genre: Fantasy, Sci-Fi & Fantasy, Supernatural, Suspense, Thriller
Inspiring Generation ( 2014 )
ကိုရီးယားကားဆိုလို့ရှိရင် ချစ်သူရည်းစားအချင်းချင်း သာယာ ကြည်နူးနေတာကို ၁၆ ပိုင်းလောက် ရိုက်ပြထားတာကို သရေတမြားမြားနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရတာထက် ဒီလိုဇာတ်ကားမျိုးတွေကို ကြည့်ရတာ ပိုသဘောကျတယ်ဗျ … ဒီဇာတ်ကားလေးက 1985 ကနေ 1988 နှစ်အထိ ထုတ်ဝေဖြန့်ချေခဲ့တယ့် ဆရာ Bang Hak-gi ရဲ့ Manhwa ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ် … ဘတ်ဂျက်စုစုပေါင်း အမေရိကန်…
Tada Never Falls in Love ( 2018 )
ကျောင်းသား အချစ် ဟာသ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ongoing Anime Series လေးတစ်ခု တင်ပေးမယ်နော် … အချစ်ဇာတ်လမ်းသာ ဆိုတယ် … နာမည်ကို တစ်ချက်ရှိုးလိုက် … ” Tada Never Falls in LOVE ” တဲ့ … ဘာလားပေါ့ ??? 🤣 ကြာပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးပြောမယ်နော်…
Queen For Seven Days ( 2017 )
ဒီကား​လေးက​တော့နန်းတွင်းကား​တွေကိုကြည့်​ချင်​တဲ့ပရိတ်​သက်​ကြီးအတွက်​အကြိုက်​​တွေ့​စေမှာပါ …. 1.6.2017 မှစတင်​ထုတ်​လွှင့်​ခဲ့ပြီး ongoing ကား​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ …. Main Cast တွေကတော့ Yeon Woo Jin , Lee Dong Gun & Park Min Young ( ကင်နာနာ ) တို့ ပါဝင်ထားပါတယ် … Supporting Role အနေနဲ့…
Lawless Lawyer ( 2018 )
Lawless Lawyer IIJimae 2008 ဇာတ်ကား, 2016 မှာလဲ Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo ဇာတ်ကား 2017 မှာ Criminal Minds ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တော်တော် များများနဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ Lee Joon-gi ကတော့ အခု တစ်ခါမှာလဲ 2014 က The…
Genre: Action, Action & Adventure, Adventure, Comedy, Romance
Sotus S The Series ( 2017 )
အားလုံးပဲ Sotus ကို ကြည့်​ဖူးကြမယ်​လို့ထင်​ပါတယ်​ မကြည့်​ဖူးလည်း ကြည့်​ကြည့်​ပါ အဆက်​မပြတ်​​အောင်​လို့​ပေါ့ … Sotus က ​ကျောင်းတွင်း အချစ်​ပုံပြင်​​လေး အခု Sotus s က ရုံးတွင်း အချစ်​ပုံပြင်​​လေး​ပေါ့ … စီနီယာ​ ဂျူနီယာ အချစ်​ဇာတ်​လမ်းက ​ကျောင်းတွင်းမှာ အဆင်​​ပြေနိုင်​​ပေမယ့်​ … ရုံးတွင်းကျ​တော့ အခက်​အခဲ​လေး​တွေ ရှိ​တာ​ပေါ့ … သူတို့​တွေ…
Trailer: Life on Mars ( 2018 )